(အမိုးနီးယား မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အမ်မိုးနီးယားကို ၃၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ အေး အောင်ပြုလုပ်လျှင် အရည်ဖြစ်လာသည်။ အမ်မိုးနီးယားသည် -၃၃၏၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ဆူပွက်၍ -၇၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် တွင် အခဲဖြစ်သွားသည်။ အမ်မိုးနီးယားကိုအအေးခံ၍ ဖိအား ကောင်းကောင်းနှင့် ဖိလိုက်သောအခါ အလွယ်တကူနှင့် အရည် ဖြစ်သွားနိုင်သဖြင့် သံမဏိစည်ကြီးများထဲတွင်ထည့်၍ သယ်ယူ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်လေသည်။
↑ Yost, Don M. (2007). "Ammonia and Liquid Ammonia Solutions", Systematic Inorganic Chemistry. READ BOOKS, 132. ISBN 1-4067-7302-6။
↑ (1996) The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, 12th, Merck. ISBN 0-911910-12-3။
↑ ၆.၀ ၆.၁ Zumdahl, Steven S. (2009). Chemical Principles 6th Ed. Houghton Mifflin Company, A22. ISBN 0-618-94690-X။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အမ်မိုးနီးယား&oldid=350350" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇၊ ၁၂:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။